June 2010 | TechSectors
ဒီနေ့ကျွန်တော် လူသိနည်းသေးပြီး အသုံးဝင်တဲ့ File Sharing နဲ့ Online Backup လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ချို့ကို ဖော်ပြသွားချင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်သွားမယ် ဆိုတာကို မဖော်ပြသေးခင်မှာ ကျွန်တော်တို့ ဘာကြောင့် ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကို လုပ်ဆောင်သင့်တယ်ဆိုတာ အကြောင်းပြချက်တစ်ချက်တစ်ချို့ ပြဿနာရပ်တစ်ချို့နဲ့ အရင်မိတ်ဆက် ပေးပါ့မယ်။
အဓိက ပြသနာရပ် : ကျွန်တော်တို့မှာ documents တွေ ၊ photos တွေ ၊ အမြဲနားထောင်နေကျ selection သီချင်းတွေ ၊ နောက် တစ်ခြား တန်ဖိုးရှိတဲ့ အရေးကြီး files တွေ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ home computer ထဲမှာ ရှိနေပါတယ်။ ဒီ home computer ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ဖိုင်တွေကို ကျွန်တော်တို့ ဘယ်နေရာသွားသွား ပါအောင် နေရာတကာ ယူသွားဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး - ဒါ့အပြင် ကျွန်တော်တို့ ခရီးသွားလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အသုံးလိုလို့ ဒါမှမဟုတ် အရေးပေါ် အခြေအနေတစ်ခုမှာ တစ်ခြားကွန်ပြူတာ တစ်ခု ( ဥပမာ - ရုံးက ကွန်ပြူတာ ) ကနေ ဒီဖိုင်တွေ သုံးဖို့လိုပြီဆို ကျွန်တော်တို့ ဒီဖိုင်တွေကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့များ access လုပ်နိုင်ပါ့မလဲ။
အဖြေ : အလွယ်ကူဆုံး အဖြေကတော့ ကျွန်တော်တို့ အိမ်ကကွန်ပြူတာထဲမှာ ရှိနေတဲ့ Data တွေအားလုံးကို ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ portable hard drive တစ်ခုခုထဲ ကော်ပီ ကူးထည့်ပြီး သယ်တဲ့နည်းပါ - ဒါပေမယ့်လည်း ဒီနည်းလမ်းက ကိုယ့်အိမ်က ကွန်ပြူတာထဲမှာ ရှိနေတဲ့ Data တွေ ပြောင်းလဲမှုပေါ် မူတည်ပြီး hard drive နဲ့ computer ကို မကြာခဏတစ်ခါ ချိတ်ဆက်ပြီး manually sync လုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်က စပြီး သုံးခါစမှာ သိပ်ပြီး ပြသနာ မရှိပေမယ့် နောက်ပိုင်း နေ့စဉ် အပတ်စဉ် manually sync လုပ်ရတာတွေ များလာတဲ့ အခါ ကိုယ့်အတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကြီး တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီ့ထက် အဆင်ပြေမယ့် တစ်ခြား နည်းလမ်း တစ်ခုခုကို ကျွန်တော်တို့ လှည့်တွေးကြည့် ရအောင်ပါ။
သင် အသုံးပြုနေသော အင်တာနက်အား တန်ဖိုးရှိစွာ အသုံးချပါ
ကျွန်တော်တို့ နေ့တိုင်း ဂိမ်းဆော့ Chatting တက် အခြွေကည့်လုပ်နေတဲ့ အင်တာနက်ဆိုတာ အသုံးချတတ်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အတွက် နောက်ထပ် အများကြီး အဖိုးတန်တာတွေ ပေးစွမ်းနိုင်ပါသေးတယ် - အခုလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိမ်မှာ ရှိနေတဲ့ ကွန်ပြူတာထဲမှာ သိမ်းထားတဲ့ ဖိုင်တွေကို တစ်ခြား အပိုပစည်းတွေ သယ်ဆောင်စရာ မလိုပဲ ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ တစ်ခြားနေရာတစ်ခုကနေ Internet ကို အသုံးပြုပြီး ဘယ်လို access လုပ်ဆောင်သွားလို့ ရတယ်ဆိုတာ ဖော်ပြသွားပါမယ်။
လုပ်ဆောင်နည်း ( ၁ ) : Online Backup အသုံးပြုခြင်း
Online backup service တွေအကြောင်း ကျွန်တော် ဒီနေရာမှာ အကျဉ်းချုံး မိတ်ဆက်ပေးဖူးပါတယ်။ အခုလည်း ကိုယ့်စက်ထဲ က ကိုယ့်အတွက် အမြဲ အသုံးလိုမယ့်ဖိုင်တွေကို Online backup လုပ်ဆောင်တဲ့ နေရာမှာ Online backup service တွေ ဖြစ်တဲ့ SugarSync, Carbonite, SkyDrive နောက် Dropbox ဆိုတာတွေ သုံးပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့တွေက ဘာကောင်းလဲ ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖိုင်တွေကို သက်ဆိုင်ရာ website တွေထိသွားပြီး Upload လုပ်ပြီး backup လုပ်နေစရာ မလိုပါဘူး - နားလည်လွယ်အောင် ပြောရရင် သူတို့မှာ Online backup service အတွက် သက်ဆိုင်ရာ desktop utilities တွေရှိပြီး အဲ့ဒီ့ software ကို ကိုယ့်စက်မှာ install လုပ်ဆောင်ပြီး သွားတဲ့ အချိန်မှာ သူတို့ရဲ့ Online backup service နဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကွန်ပြူတာကို ချိတ်ဆက်နိုင်အောင် ဆက်သွယ်ပေးတဲ့ folder တစ်ခုကို အဲ့ဒီ့ software က ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပြူတာမှာ automatically create လုပ်ပေးပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ လုပ်ရမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်က ကိုယ်တွေ Online မှာ Backup လုပ်ထားချင်တဲ့ ဖိုင်လေးတွေ - folder လေးတွေကို အဲ့ဒီ့ ခုနက create လုပ်ပြီး ပေါ်လာတဲ့ ဖိုဒါ အောက်ကို Drag and Drop ထည့်ပေးလိုက်ယုံပါပဲ - သူက သူ့ folder အောက်ကို ရောက်လာသမျှ ဖိုင်အားလုံး ဖိုဒါအားလုံးကို ကိုယ့်ကွန်ပြူတာကနေ သက်ဆိုင်ရာ Online backup service လုပ်ကိုင်ရာ website ဆီ သူ့ဘာသာ automatically upload လုပ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ upload လုပ်ဆောင်တဲ့ process ပြီးသွားပြီ ဆိုတာနဲ့ ကိုယ့် ဖိုင်တွေကို အင်တာနက် ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ဘယ်ကွန်ပြူတာက မဆို web browser ကနေ တစ်ဆင့် access လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Online backup လုပ်ငန်းစဉ်က အသုံးချကြည့်တဲ့ အချိန်မှာ တော်တော်ကြီးကို အသုံးပြုရ လွယ်ကူတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ Online backup service တွေထဲမှာ လက်ရှိသုံးဖြစ်နေတာ Dropbox ပါ။ ဒီအောက်မှာ မြင်နေရတာ ကျွန်တော့်စက်ထဲက Dropbox folder ပါ။
ဥပမာဆိုကြပါစို့ - ကျွန်တော့် စာအုပ်တွေထဲက ဆရာမဂျူးရဲ့ ဝတ္တုတစ်ချို့ကို Online မှာ သိမ်းထားချင်တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် ဘာနဲ့မှ ထည့်သွားစရာ မလိုပဲ ရောက်ရာနေရာကနေ ကျွန်တော့် ဝတ္ထုတွေကို ပြန် access လုပ်ချင်တဲ့ အခါ Dropbox မှာ ကျွန်တော် လုပ်ဆောင်ရမယ့် အချက်က နှစ်ချက်ပဲ ရှိပါတယ်။ အဲတာကတော့ ကိုယ်ဖတ်ချင်တယ်လို့ စိတ်ကူးထားတဲ့ ဝတ္ထုတွေကို အရင်ဆုံး ကျွန်တော်ရွေးပြီး Copy ကူးလိုက်ပါမယ်။
နောက်တစ်ဆင့် အနေနဲ့ ကျွန်တော့် My Dropbox folder ထဲက Documents folder ထဲကို အဲ့ဒီ့ folder ( ၆ ) ခုကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း Paste လုပ်လိုက်ပါမယ်။
အပေါ်မှာ မြင်နေရတဲ့ ပုံကတော့ Documents folder ထဲကို ဆရာမဂျူးရဲ့ ဝတ္တု ခြောက်အုပ် ထည့်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ Online နဲ့ အလိုလျောက် ချိတ်ဆက်ပြီး File synchronization လုပ်ဆောင်နေပုံပါ။ အစိမ်းရောင် အမှန်ခြစ်ပြထားတဲ့ ကျွန်မနှင့် ဆေးလိပ် ဆိုတဲ့ folder ဟာ Online မှာ သိမ်းပြီးပြီဆိုတာကို ဖော်ပြတာ ဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ folder တွေကတော့ သိမ်းနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံး သိမ်းဆည်းပြီးသွားချိန်မှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
သူဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း တကယ်သိမ်းဆည်းပြီးမပြီး Online ကိုတက်ကြည့်လိုက်ပါ။ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း သူ့ website မှာ ကျွန်တော်တို့ Documents folder ထဲကို Paste လုပ်လိုက်တဲ့ folder အားလုံးရောက်ရှိနေတာ ခုလိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ဒီ folder တွေကို မဖတ်ချင်တော့လို့ ဖျက်ချင်တဲ့ အခါမှာလည်း Online အထိ တက်ပြီး ဖျက်ဖို့မလိုပါဘူး - ကိုယ့်စက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ My Dropbox folder ထဲက ဖျက်ချင်တာတွေကို ဖျက်ထုတ်လိုက်တာနဲ့ Online မှာလည်း အလိုလို ဖျက်ပြီးသား ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကို ကျွန်တော်တို့က File synchronization (or 'syncing') လုပ်ဆောင်တယ်လို့ ခေါ်ဆိုပါတယ်။
Dropbox ဟာ Free ပေးတာလားလို့ မေးရင်တော့ အားလုံးကြီး Free တော့မဟုတ်ပါဘူး - ဘာကြောင့်လည်းဆို သူတို့လည်း ဒီလုပ်ငန်း လည်ပတ်ဖို့အတွက် လူတွေ - အချိန်တွေ - ငွေတွေ အများ ကြီး အကုန်အကျ ခံထားရတာ မဟုတ်ပါလား - ဒါပေမယ့်လည်း Dropbox မှာ သာမန် Free အသုံးပြုချင်သူ Users တွေအတွက် account လုပ်ပြီးတာနဲ့ သူ့ရဲ့ Dropbox မှာ 2GB ထိ Free upload လုပ်ပြီး သိမ်းဆည်းထားခွင့်ပေးပါတယ်။ 2GB ကနည်းတယ်လို့ ပြောလို့ ရပေမယ့် ကိုယ့်အတွက် အမှန်တကယ် တန်ဖိုးရှိတဲ့ အရေးကြီး ဖိုင်တွေကို ကိုယ့်ကွန်ပြူတာထဲကနေ စစ်ထုတ်လိုက်ရင် တကယ်တမ်း 2GB မပြည့်တာများပါတယ် - ဒါ့ကြောင့် 2GB ပဲ အလကားပေးတယ် ဆိုပေမယ့် အသုံးချမယ်ဆို သုံးပျော်တယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီနည်းကို အသုံးပြုထားခြင်းအားဖြင့်
အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တာတဲ့ Services တွေအားလုံးရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ အိမ်က ကွန်ပြူတာပိတ်ထားမယ် ဆိုရင်တောင် ကိုယ်အလိုရှိရာဖိုင်တွေကို မိမိရောက်ရှိရာနေရာက အလွယ်တကူ access လုပ်ဆောင်နိုင်သလို - မလိုလားအပ်တဲ့ virus တိုက်ခိုက်ခံရခြင်း ရန်ကနေ မိမိရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ data တွေကို ကာကွယ်ပြီးသား လည်း ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် SugarSync တို့ Carbonite တို့တွေမှာ mobile phone ကနေ files တွေကို access လုပ်နိုင်အောင်လည်း ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။
ဒီ services တွေရဲ့ ဆိုးကျိုးကတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီ services ကို ပထမဆုံး အသုံးပြုတာမျိုး ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ရှိနေတဲ့ Data တွေကို အရင်ဆုံး upload တင်ပြီးတဲ့ အချိန်ထိ စောင့်ဖို့လိုပါသေးတယ်။ ဒီ Upload တင်တာ ဘယ်လောက်ထိ တောင် ကြာမြင့်နိုင်လဲဆိုရင် ကိုယ်တင်တဲ့ ဖိုင်ပမာဏ များရင် များသလောက် ပိုပြီး ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။
လုပ်ဆောင်နည်း ( ၂ ) : Desktop Sharing Software အား အသုံးပြုခြင်း
ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပြူတာမှာ ရှိနေတဲ့ ဖိုင်တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တစ်ခြားနေရာတစ်ခုကနေ access လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ ဖန်တီးတဲ့ နေရာမှာ လူသိများတဲ့ free desktop sharing software တွေရှိပါသေးတယ်။ အဲတာတွေကတော့ TeamViewer တို့ UltraVNC တို့ပါ။ နောက်ထပ် services တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ သူတို့တွေကတော့ LogMeIn Pro နဲ့ CrossLoop Home ပါ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကတော့ paid services တြွေဖစ်ပါတယ်။ TeamViewer အသုံးပြုနည်းအကြောင်း ဒီနေရာမှာ အပြန်အလှန်မေးမြန်း ဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်။
တကယ်လို့များ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကွန်ပြူတာဟာ Windows နဲ့ Run ထားတဲ့ ကွန်ပြူတာ ဖြစ်မယ်ဆိုရင် သူ့မှာပါတဲ့ built-in remote desktop connection feature ကို အသုံးပြုပြီး နေရာတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုက Windows သုံးထားတဲ့ ကွန်ပြူတာ နှစ်ခုကို Internet ကနေတစ်ဆင့် access လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ Windows လို့ ဆိုပေမယ့် Windows XP နဲ့ သူ့နောက်ပိုင်း Windows တွေမှာပဲ အဲ့ဒီ feature ပါဝင်ပါတယ်။
Desktop Sharing software တွေကို အသုံးပြုမယ် ဆိုရင် အားနည်းချက်တစ်ခု ရှိပြီး အဲတာကတော့ ကိုယ့်ဖိုင်တွေကို အခြားနေရာတစ်ခုကနေ access လုပ်နိုင်ဖို့ဆို remote လုပ်မယ့် Computer ကို အမြဲ ဖွင့်ထားဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော်တော်ကြီးမားတဲ့ အားနည်းချက် တစ်ခုပါပဲ။ ဒီအပေါ်မှာ ဖော်ပြထားခဲ့တဲ့ ဖော်ပြချက် အားလုံးမှာ LogMeIn က လွဲရင် ဘယ် Options ကမှ mobile phone ကနေ files တွေကို access လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါဘူး။ LogMeIn မှာတော့ iPhone app ပါဝင်တာကြောင့်မို့ mobile phone ကနေပါ files တွေကို access လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
လုပ်ဆောင်နည်း ( ၃ ) : Browser မှနေ၍ Files များအား တိုက်ရိုက် Access လုပ်ခြင်း
Online backup services တွေ အကြောင်းကို ကျွန်တော် အပေါ်မှာ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ သူတို့ရဲ့ လုပ်ဆောင်ပုံကို အကြမ်းဖျဉ်းပြန်ပြောရရင် ကိုယ့်စက်ထဲက Data တွေကို သက်ဆိုင်ရာ Servers တွေဆီ ပို့လွှတ်ပြီး ဖြန့်ခွဲသိမ်းထားတဲ့ သဘောပါပဲ။ Screen sharing services တွေဆိုတာကလည်း ရံဖန်ရံခါမှာ နှေးကွေးနေတတ်သလို Mobiles devices တော်တော်များများ နဲ့လည်း အသုံးချလို့ မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် Home computer က files တွေကို တိုက်ရိုက်ရယူနိုင်မယ့် နောက် services တွေ ဆက်ပြီး လေ့လာကြည့်ပါမယ်။
Copernic ဆိုတာကတော့ Google Desktop လိုပဲဖြစ်ပြီး popular desktop search software အဖြစ် လူသိများပါတယ်။ သူ့ကိုသုံးပြီး ကိုယ့်ရဲ့ emails တွေ documents တွေနဲ့ ကိုယ့် Windows computer မှာရှိနေတဲ့ တစ်ခြား files တွေကို ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ သူ့မှာ myCopernic on the Go ဆိုတဲ့ paid services တစ်ခုလည်း ရှိပြီး သူကနေ home ဒါမှမဟုတ် office computer မှာ ရှိနေတဲ့ files တွေကို remote လုပ် ရှာဖွေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှာဖွေလို့ ရလာတဲ့ search results တွေကို အရင်ကြည့်ပြီး ကိုယ့် mobile phone ရှိရာဆီ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့် တစ်ခြား PC ဆီကို Download ရယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Opera Unite အကြောင်းကို ကျွန်တော် ဒီနေရာမှာ ဘယ်လို အသုံးချရတယ်ဆိုတာ ဖော်ပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ တော်တော်များများလည်း သိပြီး ဖတ်ပြီး ကြလောက်ပါပြီ။ Opera Unite ကို အသုံးပြုပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကွန်ပြူတာကို web server တစ်ခု အဖြစ်ပြောင်းလဲ နိုင်ပါတယ်။ အဲ့နောက်မှာတော့ files တွေ folders တွေကို တစ်ခြား ကွန်ပြူတာရဲ့ web browser ကနေတစ်ဆင့် ( mobile phones အပါအဝင် ) တိုက်ရိုက် access လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Opera Unite ဟာ standard web server တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးနိုင်တ့ဲအတွက်ကြောင့် တစ်ခြားဘယ်နေရာကိုမှ Upload တင်နေစရာ မလိုပဲ ကိုယ့်စက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ files တွေ folders တွေကို တစ်ခြား ကွန်ပြူတာကနေ တိုက်ရိုက် download လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် option တစ်ခုကတော့ GBridge ပါ။ သူကတော့ virtual private network တစ်ခုကို ကိုယ့်ရဲ့ Google Account တစ်ခုကိုသုံးပြီး တည်ဆောက်ပေးပါတယ်။ Company တွေမှာဆိုရင် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်သူတွေက data တွေခွဲဝေ အသုံးချရာမှာ VPNs တွေကို GBridge နဲ့ အသုံးချလုပ်ဆောင်ကြတာ တွေ့ရပါတယ်။ Company တွေမှ မဟုတ်ပါဘူး။ Home users တွေ အနေနဲ့လည်း ကိုယ်ပိုင် VPNs တွေတည်ဆောက်ပြီး files တွေကို Remote လုပ်တဲ့ နေရာမှာ လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
sync.live.com မှာ ရှိနေတဲ့ Windows Live Sync ဆိုတာလည်း internet ကို အသုံးပြုပြီး files တွေ remote လုပ်တဲ့ နေရာမှာ ရွေးချယ်သင့်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ။ လုပ်ဆောင်နည်း အနေနဲ့ကလည်း သိပ်မခက်ခဲပါဘူး။ Live Sync client ကို ကိုယ့် ကွန်ပြူတာမှာ install လုပ်ပြီး ကိုယ့် HD တစ်ခုလုံးကို Windows Live Sync website ကနေ တစ်ဆင့် access လုပ်ဆောင် ယုံပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ နောက်ဆုံး စမ်းကြည့်သင့်တာကတော့ HomePipe ပါ။ သူက တော်တော်လေး ရိုးစင်းပြီး free service လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို အသုံးပြုပြီး ကိုယ့် အိမ်မှာရှိနေတဲ့ files တွေ media တွေကို တစ်ခြားကွန်ပြူတာတွေ mobile phone တွေကနေ တစ်ဆင့်ပါ access လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ သူ့မှာ iPhone နဲ့ ခုနောက်ပိုင်း ခေတ်စားနေတဲ့ Android phones တွေ အတွက်ပါ apps တွေရှိပါတယ်။
အင်တာနက်ကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချခြင်း ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်က တကယ်တော့ ဒီလောက်နဲ့ မပြည့်စုံသွားပါဘူး - သူ့အကြောင်းကို အကျယ်ချဲ့ရေးရရင် တော်တော်လေး များဦးမှာပါ - ဒါ့ကြောင့် နောက် အကြောင်းအရာတွေမှာလည်း အလျဉ်းသင့်ရင် သင့်သလို ထပ်ပြီး ဖော်ပြသွားပါဦးမယ်။
KznT ခင်ဗျာ ....
ကျွန်တော်တို့WinRAR ခွဲထားတဲ့ဖိုင်တွေကို ပြန်ဖြေတဲ့အခါ ကြုံတွေ့နေကျဖြစ်တဲ့ CRC failed , The file is corrupt ဆိုတဲ့ ပြသနာလေးများအကြောင်းလည်း ဒီနေရာလေးမှာ အချိန်ရရင် ရှင်းပြပေးပါအုံးခင်ဗျာ ...ခဏခဏ ကြုံရပါတယ် ... တစ်ခါတစ်လေ အပိုင်း ၂၀ လောက်ဒေါင်းပီး ပြန်ဖြေလိုက်တဲ့အချိန် အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါ တော်တော်စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းပါတယ် ... တင်ပေးတဲ့သူရော ဒေါင်းတဲ့သူအတွက်ပါ တော်တော်အလုပ်ရှုပ်စေတဲ့ Error ပါ.... ခဏခဏတွေ့ရတဲ့ Diagnostic messages ပါ
C:\_Users\_MyPC\_Desktop\_New folder\_Window XP.part05.rar: CRC failed inWindow XP.rar. The file is corrupt
ဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တာလဲဆိုတာ ခွဲတုန်းက Error လား ဒါမှမဟုတ် ပြန်ဆက်တဲ့ အခါ တက်တာလားဆိုတာ .... ပီးတော့ မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ......
ဟုတ်ကဲ့ပါ ကိုမြင့်မိုရ် -
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ CRC failed , The file is corrupt လို့ဖော်ပြတာဟာ ကျွန်တော်တို့ Downloaded လုပ်ခဲ့တဲ့ ဖိုင်က corrupt file ဖြစ်နေတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ ဒါက ကျွန်တော် အလွယ်ပြောကြည့်တာပါ။ ဒီလိုပြဿနာမျိုး ကြုံရင် ပထမဆုံး လုပ်ဆောင်သင့်တာကတော့ အဲ့ဖိုင်ကိုပဲ နောက်တစ်ကြိမ် Download ချကြည့်ပါ။ အဲလိုလုပ်ဆောင်တဲ့ နေရာမှာ တစ်ခါတစ်လေ downloader programs တြွေဖစ်တဲ့ Download accelerator, Internet Download manager, flashget, ဆိုတာတွေ မသုံးပဲ browser downloading engine ကိုပြောင်းသုံးပြီး Download ချကြည့်ပါ။ ကိုယ့်စက်မှာ တင်ထားတဲ့ downloading program ကနေ အလိုလျောက် Download ချခြင်းကို တားမြစ်ဖို့ အတွက်ကတော့ download link ကို click ပေးတဲ့ အချိန်မှာ Alt ကိုနှိပ်ထားပြီး click ပေးပါ။ ဒါဆို browser downloading engine နဲ့ သူ Download ချပါလိမ့်မယ်။
Files တွေကို corrupt ဖြစ်မဖြစ် စစ်တဲ့ freeware programs တွေလည်း တော်တော်များများရှိပြီး - Corrupt downloads တွေကို ပြင်ဖို့အတွက် ထုတ်ထားတဲ့ freeware programs တွေလည်း တော်တော်များများ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျွန်တော် စမ်းခဲ့ဖူးသလောက်တော့ Corrupt files တွေကို အဲ့ဒီ့ freeware programs တွေသုံးပြီး ပြင်ဆင်တဲ့ နေရာမှာ တစ်ခုမှ အဆင်ပြေခဲ့ဖူးတာ မရှိခဲ့သေးပါဘူး။
တကယ်လို့ ဒီဖိုင်ကိုပဲ ထပ် Download လုပ်တယ် - ဒါပေမယ့် ပြန်စမ်းပြန်တော့ Corrupt ဖြစ်တုန်းပဲ ဆိုရင် အဲ့ဖိုင်ကိုပဲ အင်တာနက်ထဲမှာ Google Search Engine တို့ Torrent Search Engine ဆိုတာမျိုးတွေကနေ ပြန်ရှာပြီး သင့်တော်ရာနေရာ ကနေ Download ပြောင်းချဖို့ ကြိုးစားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဒီပြဿနာရဲ့ အရင်းအမြစ်ဟာ File ကြောင့် မဟုတ်ပဲ WinRAR ကိုယ်တိုင်ကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်စက်မှာ သုံးထားတဲ့ WinRAR ဟာ အခုလက်ရှိ မူရင်း Website မှာ ထုတ်ထားတဲ့ နောက်ဆုံး Version ထက် နိမ့်နေခဲ့မယ် ဆိုရင် စက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ WinRAR ကို အရင်ဆုံး Uninstall လုပ်ပြီး နောက်ထပ် WinRAR versions အသစ်နဲ့ ပြန်စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ WinRAR versions အသစ်ဆိုပေမယ့် Beta versions တွေ မသုံးမိဖို့ကိုတော့ သတိပြုပေးပါ။ WinRAR နောက်ဆုံး versions တွေကတော့ ဖိုရမ်မှာလည်း တော်တော်များများရှိပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း သိပ်ကြီးတဲ့ antivirus tool တွေကြောင့်လည်း ဒီပြဿနာ ပေါ်တက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် antivirus tool ရဲ့ auto-protection ခဏ Disable လုပ်ထားပြီး စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ်နည်းတစ်နည်း အနေနဲ့ကတော့ WinRAR latest version နဲ့မှ အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုရင် WinZip ကို ပြောင်းသုံးပြီး စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။
နောက်တစ်မျိုးကတော့ ALZip ပါ - သူနဲ့လည်း စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။
CRC ရဲ့ Definition ကတော့ ( Cyclical Redundancy Checking ) ဖြစ်ပြီး digital data တွေကို နေရာတစ်ခုကနေ တစ်ခုရှိရာဆီ transmitting လုပ်တဲ့ အခါမှာ accuracy ဘယ်လောက်ထိ တိကျသေချာသလဲ ဆိုတာကို စစ်ဆေးတဲ့ Error checking technique တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် CRC failed ဆိုတာ digital data တွေကို နေရာတစ်နေရာကနေ တစ်နေရာကို transmit လုပ်တဲ့ အချိန်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ Error အများဆုံး ဖြစ်နိုင်တာမို့လို့ နောက်တစ်ချက် စစ်ဆေးသင့်တာ LAN/Ethernet controllers တွေမှာ ပြဿနာ ရှိမရှိ လေ့လာကြည့်သင့်ပါတယ်။ အဲတာတွေကြောင့်လည်း download ချလိုက်တိုင်း CRC errors ပေါ်တက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် LAN drivers နဲ့ hardware ကိုသေသေချာချာ စစ်ဆေးပြီး ဖြစ်နိုင်ရင် LAN/Ethernet controllers drivers တွေကို သက်ဆိုင်ရာ websites တွေကနေ download ချပြီး အသစ်ပြန် reinstall လုပ်ဆောင်ပြီး စမ်းသင့်ပါတယ်။
တစ်ခု မဟုတ် တစ်ခုကနေတော့ အဖြေရှာတွေ့နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
ဂိမ်းလို့သာ ပြောတာ တကယ်တော့ ဒီဂိမ်းလေးတွေက ခုနောက်ပိုင်း ပေါ်တဲ့ ဂိမ်းတွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် အရမ်းကြီးကို နောက်မှာ ကျန်ခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော်က ဂိမ်းနဲ့ ပတ်သတ်ရင် ဘာမှ မယ်မယ်ရရ မသိဘူးလို့ ပြောရမယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ( ၁၅ ) နှစ် ပတ်ဝန်းကျင် ( ရ ) တန်း ( ၈ ) တန်းအရွယ်တုန်းက ကျူရှင်ပြေးပြီး သွားသွားဆော့ခဲ့တဲ့ ဂိမ်းလေးတွေ အင်တာနက်ထဲ ပြန်တွေ့မိတော့ ကိုယ်တိုင်လည်း ပြန်ဆော့ကြည့်ချင် တာနဲ့ လိုက်စမ်းရင်း ကိုယ်လို ဆော့ချင်သူတွေလည်း အပျင်းပြေဆော့နိုင်အောင် ဝေမျှလိုက်တာပါ။
တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပြူတာမှာ Windows XP, Vista ဒါမှမဟုတ် Windows7ကစလို့ Mac OS X အထိ ဘာပဲ တင်ထားတင်ထား ခုလိုမျိုး DOS games တွေကို ဆော့လို့ ရနိုင်ဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဒီ DOS Games တွေက ပုံမှန်အားဖြင့် 16-bit systems တွေအတွက်ပဲ Design လုပ်ပြီး တည်ဆောက်ထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း အင်တာနက် ရှိနေတော့ ဟိုလျှောက်ရှာ ဒီလျှောက်ရှာနဲ့ အရင်တစ်ချိန်က သိပ်သဘောကျပြီး အကြီးအကျယ်ဆော့ခဲ့တဲ့ DOS Games လေးတွေကို အခုကျွန်တော်တို့ သုံးနေတဲ့ ကွန်ပြူတာတွေမှာပဲ ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ ၉၀ ပြည့်နှစ်လောက်က 486 machines တွေမှာ ကစားနေသလိုမျိုး ကစားနိုင်အောင် ကူညီပေးတဲ့ နေရာတော်တော်များများ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ် ကောင်းတဲ့ တစ်ချက်က ဒီ DOS Games တွေကိုပဲ အင်တာနက်ပေါ်မှာ တရားဝင်အလကား ပေးနေတဲ့ ဆိုဒ်တွေ တော်တော်များများလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။
DOS ဂိမ်းများ ဆော့ကစားခြင်း
DOS games တွေကို ကျွန်တော်တို့ သုံးနေတဲ့ ကွန်ပြူတာပေါ်မှာ ဆော့ကစားနိုင်ဖို့ အလွယ်ကူဆုံး နည်းလမ်းက DOSBox ကို အသုံးပြုပြီး ကစားတဲ့ နည်းပါ။
DOSBox ဆိုတာ free program တစ်ခုဖြစ်ပြီး သူက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကွန်ပြူတာမှာ X86 ပေါ် အခြေခံထားတဲ့ sounds, video graphics တွေနဲ့ တစ်ခြား hardware တွေပါဝင်ပြီးသား DOS environment တစ်ခု ဖြစ်အောင် ဖန်တီးပေးပါတယ်။ DOSBox ဟာ Windows, Linux နဲ့ Mac OS X အားလုံးအထွက် ဖန်တီးပြီးသား ဖြစ်ပြီး ဘယ်ကွန်ပြူတာမှာ မဆို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
DOSBox ကို လွယ်လွယ်ကူကူ command line ကနေ install လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အဲ့ဒီ့နည်းလမ်းက ပြောရရင် နည်းနည်း technical ဆန်ပါတယ်။ အဲ့နည်းကို မသုံးပဲ တစ်ခြား သူ့ထက်ပိုလွယ်တဲ့ DOSBoxFrontends ဆိုတဲ့ နောက်နည်းလမ်းတစ်မျိုး DOSBox အတွက် ရှိပါသေးတယ်။
DOSBox အတွက် လူသိအများဆုံး GUI frontends ကတော့ D-Fend Reloaded ပါ။
D-Fend Reloaded ဟာ ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်သုံးနေကျ Windows application တွေကို install လုပ်ရသလိုမျိုး install လုပ်ပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်း အသုံးပြုယုံပါပဲ။ သူ့ကို install လုပ်ပြီးတာနဲ့ DOS game တစ်ခုခုကို install လုပ်ဖို့ဆိုရင် DOS program ပါတဲ့ zip file ကို D-Fend Reloaded windows ရှိရာဆီ drag-and-drop လုပ်ပြီး ဖြစ်စေ - import wizard ကို သုံးပြီး ဖြစ်စေ install လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
D-Fend Reloaded ကနေ game packages တွေလည်း ရယူနိုင်ပြီး အဲ့ဒီ့ထဲမှာ ဆိုရင် freeware ရော shareware ရော DOS games တွေ အမျိုးစုံ ပါရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ Games လေးတွေကို တစ်ခြားဘာမှ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲ စရာမလိုဘဲ DOSBox ကို အသုံးပြုပြီး အလွယ်တကူ ဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်။
MS-DOS Virtual Machine တည်ဆောက်၍ Games ကစားခြင်း
တကယ်လို့ လိုအပ်ချက် တစ်ခုခုကြောင့် DOSBox နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ favourite DOS game တွေကို ဆော့ကစားလို့ မရဖြစ်နေမယ့် သူများအတွက် နောက်ထပ်နည်းတစ်နည်း ကျန်ပါသေးတယ်။ အဲတာကတော့ DOS game တွေကို virtualization software လို့ လူသိများတဲ့ Windows Virtual PC, VirtualBox ဆိုတဲ့ Software မျိုးတွေသုံးပြီး DOS game တွေကို virtual machine ထဲမှာ ကစားဖို့ ကြိုးစားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဒါတင်မက Microsoft ကနေ free copy အနေနဲ့ ထုတ်ပေးထားတဲ့ MS-DOS operating system ကို သုံးပြီး virtual machine တစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်သလို အင်တာနက်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ FreeDOS program ကိုသုံးပြီးလည်း ဆော့ကစားလို့ ရပါတယ်။ သူတို့ အားလုံးက Free တွေချည်းပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ DOS နဲ့ run နေတဲ့ virtual machine တစ်ခု ရှိပြီ ဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ DOS programs ကို virtual machine ထဲ သွင်းပြီး ဆော့လို့ ရပါပြီ။
DOS Games များအား Browser မှတစ်ဆင့် Online တွင် ဆော့ကစားခြင်း
အရင်တုန်းကတော့ DOS games installers တွေဆိုတာ floppy disks တွေလာတာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ဒီလို ဂိမ်းလေးတွေက ဘာမှ install လုပ်စရာကို မလိုတော့ပဲ အင်တာနက် ရှိတာနဲ့ကို Browser ကနေ တစ်ဆင့် ဆော့လို့ ရနေပါပြီ။
JPC ဆိုတာ Java-based x86 emulator တစ်ခု ဖြစ်ပြီး DOS programs တွေကို Java plugin ပါတဲ့ modern browser တိုင်းမှာ ကစားလို့ ရအောင် ဖန်တီးထားပါတယ်။ JPC site မှာဆိုရင် popular DOS games တွေအဖြစ် လူသိများ လူကြိုက်များတဲ့ DOOM, Mario ... စတဲ့ နာမည်ကြီး ဂိမ်းတွေ တော်တော်များများရှိပါတယ်။ နောက်ထပ် collection games တွေစုထားတဲ့ နေရာ တစ်ခုကတော့ ဒီနေရာမှာပါ။ လောလောဆယ်မှာ Browser DOS games ပေါင်း ၁၇၃ မျိုး ရှိပြီး web browser ကနေ Java plugin ကို install လုပ်ထားယုံနဲ့ တိုက်ရိုက် ဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်။
Browser ကနေပြီးဆော့တဲ့ Java-based DOS games တွေဟာ DOSBox နဲ့ ဆော့ရသလိုမျိုး မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဆော့လို့ မရပေမယ့် သူ့ရဲ့ ကောင်းချက် တစ်ခုက Online ကနေပြီး DOS Games မှန်သမျှကို ကိုယ့်စက်ထဲ ဒေါင်းလုပ်မချခင် ကိုယ် ဘယ်ဂိမ်းလေးတွေကို သဘောကျလဲ ဆိုတာ စမ်းဆော့ကြည့်လို့ ကောင်းပါတယ်။
DOS Games များ Download ရယူခြင်း
ခုဆို ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပြူတာမှာ DOS games တွေကို ဆော့ဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပြီ ဆိုပါစို့ - ကျွန်တော်တို့ ဘာဆက်လုပ်ဖို့ လိုမလဲ ?? ဟုတ်ပါတယ် - ကျွန်တော်တို့ အတွက် ကောင်းနိုးရာရာ ဂိမ်းလေးတွေကို ရှာဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီအောက်မှာ ဖော်ပြထားတာကတော့ လူသိများပြီး DOS games တော်တော်များများကို တစ်နေရာတည်းမှာ Download ရယူနိုင်တဲ့ နေရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အောက်မှာ ပေးထားတာတွေ အရမ်းများလို့ ဘာရွေးရမှန်း မသိဖြစ်နေရင် ဒီ search engine လေးကို သုံးကြည့်ပါ။ သူက လူသိများတဲ့ PC games websites တွေကို တစ်နေရာတည်းကနေ ဖော်ပြပါလိမ့်မယ်။
1. DOS Games – DOSGames.com ကျွန်တော်တို့အတွက် favorite DOS games တွေရှာဖို့ အကောင်းဆုံး နေရာတစ်ခုပါ။
2. DOS Games Archive – DOS Games Archive ဆိုတာ DOS games ကောင်းကောင်းလေးတွေ စုထားတဲ့ နောက်ထပ် အသုံးဝင် site တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
3. D-Fend Game Packages – တကယ်လို့ D-Fend Reloaded ကို DOSBox နဲ့ တွဲပြီး install လုပ်ဖို့ ရွေးချယ်ထားတယ် ဆိုရင် DOS games တော်တော်များများကို installer ကနေ တစ်ဆင့် ထည့်သွင်းဆော့ကစားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
4. Classic DOS Games – ဒီ site မှာလည်း DOS games တော်တော်များများရှိနေပါတယ်။
5. Good Old Games – ဒီ site မှာတော့ games တွေကို modern PCs တွေအတွက် သင့်တင့်တဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ ရနိုင်ပါတယ်။
6. Abandonia – သူလည်း collection games တွေကို စုထားတဲ့ site တစ်ခုပါပဲ။
7. Home of the Underdogs – ဒီ site ကိုလည်း လေ့လာကြည့်ပါ။
နောက်ပြီး ဒီနေရာကနေ DOS games catalog ကို Wikipedia ကနေ offline reference အနေနဲ့ ရယူနိုင်ပါတယ်။ သူ့ကိုကြည့် ပြီး DOS games တိုင်းရဲ့ released date တွေကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Meeting တစ်ခုခု သွားရင်း - ကျောင်းစာကြည့်တိုက်သွားရင်း - ဒါမှမဟုတ် အရေးကြီးကိစ္စတစ်ခုခု အတွက် ထွက်လာရင်း လမ်းခရီးရောက်မှ ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ Laptop အတွက် Power ကြိုး အိမ်မှာ မေ့ကျန်ခဲ့ကြပြီ ဆိုပါစို့။ သွားရမယ့် နေရာကလည်း ရောက်ခါနီးနေပြီ။ အိမ်ပြန်ပြီး ယူဖို့ကိုလည်း အချိန်မပေးချင်တော့ဘူး - ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Laptops တွေကို အသုံးချရမယ့် နေရာမှာ Battery စားနှုန်း သက်သက်သာသာနဲ့ ကြာရှည်အသုံးချနိုင်အောင် ဘယ်လိုများ လုပ်ဆောင်ကြပါမလဲ။
တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့မှာ ရှိတဲ့ Laptop က Battery ဟာ တော်တော်လေး သုံးလာတာ ကြာတဲ့အပြင် ဘယ်လောက်ပဲ အားပြည့်အောင် သွင်းထားထား ကိုယ်လုပ်ချင်တာတွေ ပြီးဆုံးအောင်မှ မလုပ်ဆောင်ရသေးခင် ခဏလေးနဲ့ အားကုန်ကုန် သွားတတ်တဲ့ အခြေအနေမျိုးနဲ့ ကြုံနေရတဲ့ မိသားစုဝင်တွေ အတွက် " တစ်ခြား Battery တော့ လဲမှ ဖြစ်တော့မဟ " ဆိုတဲ့ အတွေးမဝင်ခင် ဒီအောက်ဖော်ပြပါနည်းတွေကို စမ်းသပ်ကြည့်ခြင်း အားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Laptops တွေမှာ ရှိနေတဲ့ Battery တွေရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းကို အထိုက်အလျောက်ထိ မြင့်တက်လာစေလိမ့်မယ်လို့ ဆိုတာ တိုက်တွန်း ပြောကြားလိုပါတယ်။
Battery အသုံးမခံအောင် ဘာတွေက လုပ်ဆောင်သလဲ ??
Battery အသုံးမခံတာကို သိထားတဲ့ နောက်မှာ Battery ကို အသုံးခံအောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ဆိုတာ မဆုံးဖြတ်ကြ သေးခင် ပထမဆုံး သိထားသင့်တာက - Battery အသုံးမခံအောင် ဘာတွေက လုပ်ဆောင်သလဲ ဆိုတာပါ။ အလွယ်ဆုံး ပြောရမယ်ဆိုရင် Modern laptops တွေမှာတော့ Battery အစားဆုံး က >> LCD panel ပါပဲ။ Microsoft ရဲ့ Windows7Engineering blog မှာ အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အသုံးဝင်တဲ့ Chart တစ်ခုကို ရေးဆွဲ ဖော်ပြထားပြီး - အဲ့ဒီ့ Chart ကနေမှ တစ်ဆင့် Laptop ရဲ့ ဘယ် Components တွေက ဘယ်လောက် % Battery စားနေသလဲ ဆိုတာ အလွယ်တကူ မြင်သာ ထင်ရှားစေပါတယ်။ ဒီ Chart ကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Battery သက်တမ်းကို ကြာကြာအသုံးခံနိုင်စွမ်းရှိအောင် ဘယ်လို လုပ်ဆောင်မယ် ဆိုတာ ဆက်ပြီး ဖော်ပြသွားပါမယ်။
ဒီ Chart ထဲမှာ add-on devices တြွေဖစ်တဲ့ flash drives တို့ USB mice တို့ ဆိုတာတွေ ဖော်ပြမထားပါဘူး - ဒါပေမယ့် သိထားရမှာက အဲဒီ့ ပစ္စည်းတွေကလည်း Battery စား များတယ် ဆိုတာ သိထားဖို့ လိုပါတယ်။ တကယ်လို့များ Power မပေးထားတဲ့ hard drive တစ်ခုခုကိုများ ကိုယ့် laptop မှာ USB port ကနေပြီး တပ်ထားမိပြီ ဆိုလို့ကတော့ သာလို့တောင် Battery စားပါလိမ့်ဦးမယ်။
ဒီအချက်တွေကို သိရှိပြီးတဲ့ နောက်မှာ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း Power Plan Settings ကို ပြင်ဆင်ကြည့်ပါ။
Power Plan Settings အား ပြင်ဆင်ခြင်း
ပထမဆုံး ကျွန်တော်တို့ လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အလုပ်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ laptop ကို Battery power သုံးပြီး လည်ပတ်တော့မယ် ဆိုတဲ့ အချိန်မှာ ဖြစ်သင့် ဖြစ်ထိုက်တဲ့ power plan ကို သတ်မှတ်ပေးထားပြီးပြီလား ဆိုတာ စစ်ဆေးဖို့ပါ။ တကယ်လို့ Computer ရဲ့ Performance ကောင်းအောင်ဆိုပြီး Power plan ကို High ထားမယ် ဆိုရင် Battery ရဲ့ အသုံးခံနိုင်မှု သက်တမ်းကလည်း ပိုပြီး လျော့ပါးစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ Battery ကို ကြာရှည် အသုံးခံနိုင်ဖို့ အတွက် Power saver ဒါမှမဟုတ် Balanced တစ်ခုခု ကို အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ရွေးချယ်ထားသင့်ပါတယ်။
အဓိက ဂရုပြုရမှာ ကွန်ပြူတာကို ကိုယ်ထိတွေ့ မကိုင်တွယ်တော့ဘူး ဆိုတာနဲ့ Display ကို အမြန်ဆုံး turn off လုပ်ခိုင်းထားဖို့ပါ။ ဒါက အထိရောက်ဆုံး Power ချွေတာတဲ့ နည်းတစ်နည်းပါပဲ။
နောက်တစ်ဆင့် အနေနဲ့ Power Plan settings ကို Advanced ပြင်ဆင်ရမယ့် နည်းလမ်းပါ။ ကျွန်တော်တို့ Laptop ရဲ့ Battery life ကို အရှည်ကြာဆုံး ပြင်ဆင်ဖို့ အတွက် ဒီအချက်တွေ ပြင်ဆင်ရပါမယ် >>
Hard Disk ရဲ့ Power plan ကို အမြန်ဆုံး turn off လုပ်နိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ပေးရပါမယ်။
Wireless adapter, processor အထူးသဖြင့် graphics card အတွက် low-power mode ကို အသုံးပြုပေးပါ။
ပုံမှာ မြင်နေရတဲ့ System cooling policy setting ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Laptop system အတွက် cooling mode ကို change ပေးတဲ့ နေရာပါ။ သူ့မှာ Active နဲ့ Passive ဆိုတဲ့ Options နှစ်ခု ရှိပြီး - Active cooling policy ဆိုတာ Processor - slow down ဖြစ်မသွားခင်ကတည်းက cooling ပိုင်းကို ပုံမှန်အတိုင်း ဖြစ်နေအောင် fan speed ကို မြှင့်တင်ထားတာ ဖြစ်ပြီး - Passive cooling policy ဆိုတာကတော့ Processor - slow down ဖြစ်တဲ့ အချိန်မှ fan speed ကို မြှင့်တင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Options နှစ်ခုထဲမှာ Passive cooling policy ဟာ Power consumption ပို ထိန်းထားနိုင်ပြီး battery life ကိုလည်း ပိုပြီး ကြာရှည်စေပါတယ်။
အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့ အထူးပြင်ဆင်မှုတွေ အပြင် power plans နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး နောက်ထပ် ပြင်ဆင်သင့်တာတွေ ရှိပါသေးတယ်။
Screen အလင်းအမှောင်အား ချိန်ညှိပါ။
ကျွန်တော်တို့ အပေါ်ဆုံးမှာ LCD screen တွေဆိုတာ battery life ကို အမြန်ဆုံး နဲ့ အများဆုံး ကုန်အောင်စားတဲ့ source တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ battery life ကို ကြာကြာရှည်ရှည် အသုံးခံနိုင်ဖို့ ဆိုရင် Screen ရဲ့ အလင်းအမှောင် ( screen brightness ) ကိုလည်း ချိန်ညှိထားဖို့လိုပါတယ်။ Laptops တော်တော်များများမှာတော့ screen brightness ကို ချိန်ညှိနိုင်ဖို့ အတွက် ဖော်ပြပါအတိုင်း function key တွေပါရှိပါတယ်။ အဲလို function key တွေကို ဖိနှိပ်ပြီး screen brightness ကို ချိန်ညှိထားနိုင်ပါတယ်။ screen brightness ကို ချိန်ညှိတဲ့ နေရာမှာ battery life ကို ကြာရှည် အသုံးခံနိုင်ဖို့ အတွက် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းကတော့ အလင်းကို မစူးရှလွန်းပဲ သာမန် မိမိတစ်ကိုယ်ရေ တစ်ကာယ ကြည့်လို့ ရယုံ ပမာဏလောက်ထိ လျော့ချပြီး ချိန်ညှိထားဖို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။
ဒါတင်မက ကိုယ့်ရဲ့ laptop ကို အသုံးမပြုဖြစ်တဲ့ အချိန်တွေမှာ Display ကို အမြန်ဆုံး Turn off လုပ်ဖို့ power plan မှာ ပြင်ဆင်ထားရမယ့် အပြင် - မလိုလားအပ်တဲ့ graphics စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို အသုံးပြုမယ့် screensavers တွေကိုလည်း အသုံးမပြုထားမိဖို့ လိုပါတယ်။
Web sites တွေ တော်တော်များများကလည်း battery life ကို ပိုပြီး တာရှည်ခံဖို့ Windows Aero ကို Disable လုပ်ခိုင်းကြတာ တွေ့ဖူးပါလိမ့်မယ်။ ဒါလည်း မှန်ပါတယ်။ သူ့ကို Disable လုပ်ထားခြင်း အားဖြင့် battery life ကို အနည်းငယ် ပိုပြီး ကြာရှည် အသုံးခံ စေပါတယ်။
Power Consumption အတွက် Hardware များအား စစ်ဆေးပါ
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ Laptops မှာ Bluetooth adapter များ အသုံးပြုထားတာ ရှိနေပါသလား ?? တစ်ခု သိထားရမှာ အဲလို devices တွေကို Enable ပေးထားခြင်းဟာလည်း Power စားစေတဲ့ အချက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့များ ကိုယ်က ဒီ devices တွေကို သုံးနေတာ မဟုတ်ဘူး ( အသုံးမပြုဘူး ) ဆိုရင် သူတို့ကို Disable ပေးထားခြင်းကလည်း battery life ကို အနဲငယ် ထိန်းသိမ်းရာ ရောက်ပါတယ်။ နောက်ပြီး Wireless connection မရှိတဲ့ နေရာတွေမှာ ကိုယ့် laptop ကို သုံးဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်း Wi-Fi ကို Disable ပေးထားဖို့ လိုပါတယ်။
နောက်ပြီး မလိုအပ်ပဲ PC Card adapter အသုံးပြုခြင်းကိုလည်း ရှောင်ကျဉ်ပါ။ သူတို့တွေကလည်း battery စားနှုန်း များပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Laptop မှာ RAM ပမာဏရော လုံလုံလောက်လောက်ရှိပါရဲ့လား - ဒါကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ တကယ်လို့ memory ထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ဖို့ RAM ပမာဏ အလုံအလောက် မရှိတော့တဲ့ အခါ Windows က Disk ကိုသွားပြီး ပြဿနာရှာတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် RAM ပမာဏ နည်းတဲ့ Laptop တွေအတွက် RAM ပမာဏကို ထပ်တိုးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် တစ်ကြိမ်တည်း တစ်ပြိုင်တည်းမှာ Applications တွေ အများကြီး အသုံးပြုခြင်းမျိုးကနေ ရှောင်ကျဉ်တာမျိုး လုပ်ဆောင်ဖို့ စဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်။
Background Processes နှင့် Services များအား ထိန်းချုပ်ပါ။
နောက်ကွယ်က System ထဲမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ဆိုတာ PC တစ်လုံးရဲ့ performance ကို ကျဆင်းစေ ယုံသာမက ကျွန်တော်တို့ Laptops တွေရဲ့ battery life ကိုပါ ကျဆင်းစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် battery power ကို အသုံးပြုပြီး လုပ်ငန်းတစ်ခုခု လုပ်ဆောင်နေစဉ်မှာ background applications တွေ အကုန်လုံးကို ပိတ်ထားနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ Automated updaters တွေ scheduled tasks တွေ အထူးသဖြင့် search indexing တွေကို disable လုပ်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အဓိက target ထားပြီး remove လုပ်သင့်တာ Windows desktop gadgets တွေပါ - အဲဒီ့ applications တွေဟာ system tray ထဲမှာ ရှိနေပြီး ကျွန်တော်တို့ laptops က Power ကို စားမှန်း မသိ စားနေကြတဲ့ applications တြွေဖစ်ပါတယ်။ အဲတာကြောင့် ကိုယ့် အတွက် တကယ် မလိုအပ်တဲ့ applications တွေကို uninstall လုပ်ရင် လုပ်ပစ် ဒါမှ မဟုတ်ရင်လည်း system tray ထဲကနေ ရှင်းထုတ်ပစ်ဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို တစ်ခုချင်း လိုက်လုပ်ဖို့ မလိုပဲ on တာ off တာတွေကို အလွယ်တကူ လုပ်ဆောင်ချင်တယ်ဆိုရင် Open- source system tray utility တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Aerofoil ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Aerofoil ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ notebook တွေကို Battery power နဲ့ အသုံးပြုနေချိန်မှာ ကြာကြာ အသုံးခံနိုင်စေဖို့ မလိုလားအပ်တဲ့ Aero Glass နဲ့ တစ်ခြား အသုံးမလိုပဲ Battery စားစေတဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို အလိုလျောက် turn off လုပ်ပေးပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်လျှင် Hibernate Mode အား အသုံးပြုပါ။
Hibernation နှင့် Sleep Mode ကွာခြားချက်အား သုံးသပ်ခြင်း ဆိုပြီး ကျွန်တော် ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ Sleep mode အစား Hibernate mode ကို ပြောင်းလဲသုံးစွဲခြင်း အားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ Laptops တွေ အတွက် power သုံးစွဲမှု လျော့နည်းပြီး - တကယ်တမ်း အသုံးပြန်လိုတဲ့ အချိန်မှာ နောက်ထပ် နာရီအနည်းငယ် ပိုမို အသုံးပြုနိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း Hibernate mode ကို အသုံးမပြုခင် Hibernation နှင့် Sleep Mode က ဘာတွေ ကွာတယ် ဆိုတာ သေသေချာချာ လေ့လာစေချင်ပါတယ်။
Battery အား Heat မတက်စေရန် ထိန်းသိမ်းပါ။
Laptop batteries တွေဆိုတာ သူတို့ကို အားမသွင်းပဲ ဖြစ်ကတတ်ဆန်း ကြာရှည် သုံးတော့မှသာ စွမ်းဆောင်ရည် ကျတတ်တာမျိုးပါ - ဒါပေမယ့် ကိုယ့် laptop က အမြဲတမ်းလိုလို overheating ဖြစ်နေတာမျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ် - ရာသီဥတု ပူပူ - ပတ်ဝန်းကျင် ပူပူမှာ laptop ကို အမြဲတစ်စေ သုံးရတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် - အဲလိုအခြေအနေ မျိုးတွေမှာတော့ ခဏချင်းနဲ့ battery ကြွတတ်ပါတယ်။
ခုခေတ် laptops တွေဟာ nickel batteries တွေအစား Lithium batteries တွေကို အသုံးပြုလာကြပါပြီ။ Laptops ရဲ့ Batteries တွေကို ဘယ်လို အားသွင်းမလဲ - ဘယ်လို အသုံးချရမလဲ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ရောထွေးနေတဲ့ အယူအဆ တစ်ချို့ ရှိပါတယ်။ အမှန်က >> Nickel batteries ကို သုံးထားတဲ့ Laptops တွေဆိုရင် သူ့ရဲ့ battery life ကို ကောင်းမွန်စေဖို့ အတွက် အားထပ်မဖြည့်ခင် နဂိုရှိပြီးသား အားကို ကုန်အောင် သုံးပြီးမှ recharge ပြန်လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Lithium batteries တွေကတော့ သူနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပါ။ သူက recharge လုပ်ဖို့အတွက် အရင်ဆုံး အားကုန်အောင် သုံးဖို့ မလိုပါဘူး - နောက်တစ်ချက်က lithium battery တွေကို အားကုန်အောင်ကျ သုံးပြီး အားပြန်မသွင်းပဲ ပစ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင် တကယ်တမ်း ကိုယ် ပြန်အသုံးပြုတဲ့ အချိန်မှာ အားပြန်သွင်းမရတော့တဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက် အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ Laptops တွေမှာ သုံးထားတဲ့ battery တွေကို အမြဲတမ်း fully charged ဖြစ်မနေစေဖို့ကိုလည်း ဂရုပြုပေးပါ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင် — Wikipedia မှာ ဖော်ပြထားချက်အရ lithium battery တွေဟာ အချိန်ပြည့် fully charged နဲ့ ထားရင် ကိုယ်ဘယ်လောက်ကြီးပဲ Battery ကို ဂရုစိုက်စိုက် သူ့ရဲ့ အသုံးခံနိုင်စွမ်းက တစ်နှစ်ကို 20% ဆုံးရံှုးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ တစ်ခါတစ်ရံမှာ battery ကို အားလျော့အောင် သုံးပေးဖို့ကိုလည်း အကြံပေးလိုပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ Laptops တွေမှာ ရှိနေတဲ့ Battery တွေကို ကြာရှည် အသုံးခံနိုင်အောင် ဘယ်လို အသုံးပြုမလဲဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။
Kaspersky Anti-Virus/Internet Security 2010 ကို Offline Updates ဘယ်လို လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာရယ် ၊ အသင့် Download ချနိုင်မယ့် offline updates တွေကိုရယ် အားလုံး ကျွန်တော် ဒီနေရာမှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ - အခု နောက်ပိုင်း Kaspersky Anti-Virus/Internet Security 2011 ပေါ်လာတော့ ကျွန်တော့် Topic ကလည်း 2010 မှာတင် ရပ်နေလို့ မဖြစ်တာနဲ့ 2011 ဘက်ကို ဆက်ကူးလိုက်တာပါ။ Kaspersky Anti-Virus/Internet Security 2011 Offline updates ရယူနည်းနဲ့ Kaspersky Anti-Virus/Internet Security 2010 offline updates ရယူနည်းက အတူတူပါပဲ - ကျွန်တော်အရင် ဖော်ပြခဲ့တဲ့ Kaspersky Offline Update လုပ်ဆောင်နည်း - နည်းလမ်း ( ၃ ) ခုထဲက ဒုတိယနည်းဖြစ်တဲ့ Updater.bat file အား အသုံးပြု၍ install လုပ်ဆောင်ခြင်း ကို အသုံးပြုပြီး offline updates တွေကို ရယူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ဆောင်နည်း အားလုံးတူညီပေမယ့် အသုံးပြုရမယ့် Updater.exe ကတော့ မတူညီပါဘူး။ ကျွန်တော်တင်ပေးမယ့် offline updates တွေကို မစောင့်နိုင်မယ့် မိသားစုဝင်များအတွက် offline updates တွေကို ရယူတဲ့ နေရာမှာ တစ်ခုချင်းစီမှာ ပြောင်းလဲအသုံးပြုရမယ့် Updater.exe တွေကို ဒီအောက်မှာ Download ချနိုင်အောင် ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
Updater.exe for Kaspersky Anti-Virus 2010
Updater.exe for Kaspersky Internet Security 2011
Install လုပ်ဆောင်နည်း အဆင့်ဆင့်ကတော့ အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်းပါ။
Offline Updates Installation Guide for Kaspersky Anti-Virus 2011
ပထမဆုံး ကျွန်တော် Download ချဖို့ ပေးထားတဲ့ Kaspersky Anti-Virus 2011 ကို အရင်ဆုံး ဒေါင်းလုပ်ချလိုက်ပါ။
Main application window ကို အရင်ဖွင့်ပါ။
Main application window ရဲ့ ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ Update tab ကိုသွားပါ။
Main application window ရဲ့ ညာဘက် အပေါ်ထောင့်နားမှာ ရှိနေတဲ့ Settings button ကို click ပေးပါ။
Settings window ရဲ့ ညာဘက်ခြမ်းမှာ ရှိနေတဲ့ Update source tab အောက်က Settings button ကို click ထပ်ပေးပါ။
Update settings window မှာ Source tab ရဲ့ အောက်မှာ ရှိနေတဲ့ Add button ကို click ပေးပါ။
နောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ ဝင်းဒိုးကနေ Download ချပြီး ဖြည်ထားတဲ့ Updates folder ရှိတဲ့နေရာကို ညွှန်ပေးပါ။ ( ဒီနေရာမှာ အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ပုံနဲ့ နေရာချင်း လွဲကောင်းလွဲနေနိုင်ပါတယ်။ )
Select folder source window က OK button ကို click ပေးပါ။
Update settings window ရဲ့ Source tab မှာ Kaspersky Lab update serevers ကို uncheck ပေးပါ။
Update settings window က OK button ကို click ပေးပါ။
Settings window က OK button ကို click ထပ်ပေးပါ။
Databases နဲ့ modules update process ကို စ run နိုင်ပါပြီ။
Offline Updates Installation Guide for Kaspersky Internet Security 2011
ပထမဆုံး ကျွန်တော် Download ချဖို့ ပေးထားတဲ့ Kaspersky Internet Security 2011 ကို အရင်ဆုံး ဒေါင်းလုပ်ချလိုက်ပါ။
Updates Distribution for KAV / KIS 2011
Kaspersky Internet Security 2011 နဲ့ Kaspersky Antivirus 2011 တို့အတွက် Offline Updates တွေကတော့ ဒီအောက်မှာပါ။ နောက်ဆုံး Update လုပ်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကတော့ Sun June 20 2010 ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ် တစ်ကြိမ် တနင်္ဂနွေတိုင်း ကျွန်တော် ပုံမှန် Update လုပ်ပေးသွားပါ့မယ်။
Updates Distribution for KAV 2011 Sun June 20 2010
Updates for KIS_11.0.0.232
Updates for KAV_11.0.0.232
ဘာလိုလိုနဲ့ ကိုဦး ဒီအကြောင်းမေးထားတာ ( ၂ ) ရက်ရှိပြီ - ကျွန်တော်လည်း ဖိုရမ်က အမြန်ဖြေရလွယ်တဲ့ တစ်ခြားအခက်အခဲလေးတွေ လိုက်ဖြေရင်းနဲ့ ဒီဘက်ကို မလှည့်ဖြစ်ဘူး ဖြစ်နေတာပါ - စိတ်ထဲမှာ လုပ်မယ် လုပ်မယ်နဲ့ စိတ်ကူးထားတာ တော်တော်များများ ရှိတယ် - ဟိုရေးလက်စ မပြတ်သေးတဲ့ အားလုံးအတွက် Ubuntu ( Linux ) ဆိုတာလည်း ဆက်ရေးဖို့ လုပ်နေတယ် - နောက် သူနဲ့ အပြိုင် နောက်ထပ် Linux ခေါင်းစဉ် တစ်ခုရေးမယ် ဆိုပြီး အစပျိုးနေတာလည်း ရှိတယ် - နောက်ထပ် Windows ဘက်က သိထားတာလေး ပြောပြချင်လို့ အချက်အလက် စုထားတာတွေလည်း ရှိတယ် - လောလောဆယ်တော့ အဲတာလေးတွေ ခဏ ဘေးချိတ်ပြီး compizconfig-settings-manager အကြောင်းလေး ဆွေးနွေးလိုက် ပါဦးမယ် -
အခု ကျွန်တော် ဆွေးနွေးသွားချင်တာ Ubuntu မှာ လူသိများပြီး တွေ့ဖူးသူတိုင်းလည်း စမ်းသပ်ချင်ကြတဲ့ Ubunutu ရဲ့ နာမည်ကြီး compizconfig-settings-manager အကြောင်းပါ - compizconfig-settings-manager အကြောင်းကို ဆွေးနွေးမယ်လို့ ကျွန်တော် ပြောပေမယ့် သူ့ရဲ့ အသုံးပြုပုံ အကြောင်းကို အသေးစိတ်တော့ ကျွန်တော် ဆွေးနွေးသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး - ကျွန်တော် ဆွေးနွေးသွားမှာ compizconfig-settings-manager ကို အသုံးပြုဖို့ အတွက် ဘာတွေ အရင်ဦးဆုံး လုပ်ဆောင်ထားရမယ် ဆိုတာရယ် သူ့ကိုသုံးပြီး ဖန်တီးနိုင်မယ့် အလှအပ တစ်ချို့လောက်ကို အသုံးအပြုဖူးသူတွေ အတွက် မိတ်ဆက် သဘောလောက် ဖော်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် အပြည့်အစုံ မဖော်ပြသလဲ ဆိုရင် မိသားစုဝင်များ ဒီ compizconfig-settings-manager ကို သုံးဖူးတဲ့ သူတွေလည်း သိပါလိမ့်မယ် - သုံးဖူးတဲ့အခါလည်း သိပါလိမ့်မယ်။ သူ့မှာ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ Effects တွေ ၊ Animations တွေက တော်တော်ကြီးကို များတာပါ - ကျွန်တော့် အနေနဲ့ အဲ့ဒီ့လောက် အများကြီးကို တစ်ခုချင်း လိုက်စမ်းပြီး ရှင်းပြဖို့ ဆိုတာ တော်တော်ကြီးကို ခက်ခဲပါတယ်။ နောက်ပြီး တစ်ခုချင်းစီ လုပ်ဆောင်ပုံကလည်း တကယ်တမ်း ပြောသလောက်ကြီး မခက်ခဲတာ မို့လို့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အကျဉ်းချုံးပြီးပဲ မိတ်ဆက်ပေးဖို့ စီစဉ်လိုက်တာပါ။
compizconfig-settings-manager ကို ဘယ်ကနေ ဒေါင်းလုပ်ချရမယ် ဘာတွေ Install လုပ်ဆောင်ထားဖို့ လိုအပ်မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် ဒီနေရာမှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ - ဒါကြောင့် ကျွန်တော့် အနေနဲ့ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်တဲ့သူ အနေနဲ့ compizconfig-settings-manager ကို Install လုပ်ဆောင်ပြီးသူ တစ်ယောက် အဖြစ်ယူဆပြီး ဆက်ဆွေးနွေးသွားပါမယ်။ compizconfig-settings-manager ကို အသုံးချဖို့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ ပထမဆုံး စတင်လုပ်ဆောင်ထားရမှာ ကျွန်တော်တို့ စက်မှာ ရှိတဲ့ Graphic card ကို 3D effects နိုင်အောင် အရင်ဆုံး ပြင်ဆင်ထားရမယ် ဆိုတာပါ။ ဒါကို လုပ်ဆောင်ဖို့ အတွက် System > Administration > Hardware Drivers ကိုသွားလိုက်ပါ။ password တောင်းရင် password ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။ အဲ့ချိန်မှာ အောက်မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ စက်မှာ ရှိနေတဲ့ Graphic card ကို မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ဒီ Hardware Drivers ( Graphic card ) ကို Desktop effects လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စေဖို့ ပထမဆုံး Activate လုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ Activate ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ downloading လုပ်ငန်းစဉ် စတင်ပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Graphic card အတွက် သင့်တော်တဲ့ Driver ကို install လုပ်ဆောင်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ "Desktop effects could not be enabled" ဆိုတဲ့ Error message နဲ့ တိုးခဲ့ရင် ဒီနေရာကို သွားပါ။
Install လုပ်ဆောင်ပြီးသွားရင် သူက Restart တောင်းပါလိမ့်မယ်။ ကွန်ပြူတာကို Restart ပေးလိုက်ပါ။ Reboot ပြန်တက်လာရင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အပေါ်ညာဘက် ဘားမှာ ခုလိုမျိုး ပုံစံ ခပ်ဆင်ဆင် မြင်ရပါလိမ့်မယ်။
သူ့ကို ကလစ်ပေးလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ခု အောက်ဖော်ပြပါပုံအတိုင်း ဒီကွန်ပြူတာအတွက် သင့်တော်တ့ဲ drivers တစ်ခု installed လုပ်ဆောင်ပြီးလို့ အသုံးပြုဖို့ အသင့် ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြပါလိမ့်မယ်။
ခုလို ဖော်ပြထားတာကို တွေ့ပြီ ဆိုတာနဲ့ compizconfig-settings-manager ကို စတင် အသုံးပြုလို့ ရပါပြီ - compizconfig-settings-manager ကို စတင်အသုံးပြုတော့မယ့် အချိန်မှာ နောက်ထပ် စစ်ဆေးထားသင့်တာလေးတွေ ရှိပါသေးတယ်။ အဲတာကတော့ Desktop ရဲ့ ညာဘက်အောက်ထောင့်မှာ workspaces အနည်းဆုံး ( ၄ ) ခုရှိရဲ့လား ဆိုတာ စစ်ဆေးပေးပါ။ များသော အားဖြင့်တော့ ( ၄ ) ခုရှိတာ များပါတယ်။ မရှိသေးရင် click ပေးပြီး preferences ကနေ4columns 1 row ကို ရွေးပေးပါ။ ဒါက အလွယ်နည်းပါ ဒီ workspaces တိုးတာကိုပဲ ccsm ထဲက General Options > Desktop Size > Horizontal Virtual Size ကနေ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း တိုးလို့ ရပါသေးတယ်။
"Cube" အား အသုံးပြုခြင်း
နောက်တစ်ဆင့် အနေနဲ့ System > Preferences > Advanced Desktop Effects Settings ဒါမှမဟုတ် "Compiz Configuration manager" ဆိုတဲ့နေရာကို သွားပါ။ Desktop tab ဆိုတာရဲ့အောက်မှာ "Rotate cube" ဆိုတာရယ် "Desktop cube" ဆိုတာရယ်ကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
အဲ့ဒီ့ ( ၂ ) ခုကို activate ပေးလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ desktop wall ကို disable ပေးဖို့ အသိပေးလာပါလိမ့်မယ်။ ဒီအတိုင်း ဆက်သွားပါ။ Cube ကို Rotate လုပ်ဖို့အတွက် Default key ကတော့ Ctrl+Alt+<Arrow Left> ဒါမှမဟုတ် Ctrl+Alt+<Arrow Right> ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း Cube ကြီးကို ကိုင်ပြီး ဟိုရွှေ့ ဒီရွှေ့ရွှေ့ဖို့ကတော့ Ctrl+Alt+Left Mousebutton ပါ။
ရှုး တိုးတိုး ကောင်မလေး အိပ်နေတယ် :D
Cube ကို စစသုံးသုံးချင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ တွေ့ရမယ့် Cube က ကျပ်ပိတ်ကြီးပါ - ဆိုလိုတာ Cube ရဲ့ မျက်နှာစာ တစ်ဖက်ကနေ တစ်ခြား မျက်နှာစာ တစ်ဖက်ကို ဖော်ကြည့်လို့ မရ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အဲလို ဖြစ်နေတာကို Cube ရဲ့ မျက်နှာစာ တစ်ဖက်ကနေ တစ်ခြား မျက်နှာစာ တစ်ဖက်ကို ဖောက်ထွင်း မြင်နိုင်အောင် လုပ်ပါ့မယ်။ Desktop Cube > Transparent Cube > Opacity During Rotation ကိုသွားပြီး သူထားထားတဲ့ ၁၀၀ ကနေ ၈၅ ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကို လျော့ချလိုက်ပါ။ များများလျော့လေ များများဖောက်မြင်ရလေပါပဲ။ Tab တစ်ခုချင်း လိုက်စမ်းကြည့်ပါ - ပြောင်းလဲချက်တွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
COMPIZ SETTINGS MANAGER အား အသုံးပြု၍ အခြားအရာများ လုပ်ဆောင်ခြင်း
Compiz Settings Manager အသုံးပြုပုံကတော့ တော်တော်လေး ကျယ်ပြန့်ပါတယ် - ကိုယ် ဖန်တီးနိုင်ရင် ဖန်တီးနိုင်သလောက် စိတ်ရှည်ရင် ရှည်သလောက် လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ Effects တွေက တော်တော်လေးကို များပါတယ်။ Window Management အောက်မှာ ရှိတာတွေကို ဟိုပြင်ဒီပြင် လိုက်ပြင်ကြည့်ပါ။
တစ်ခုခုကို ပြောင်းလဲစမ်းသပ်တဲ့ အခါမှာ shortcuts တွေက ဘာမှန်း မသိ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ ဆိုကြပါစို့ Shift Switcher ကို စမ်းသပ်မယ် ဆိုရင် သူ့ခေါင်းစဉ်ထဲကို ထပ်ဝင်လိုက်ပါ။ ခုလိုနေရာမှာ ဘယ် shortcuts ကို သုံးရမယ်ဆိုတာ မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီ shortcuts တွေက တရားသေချည်း မဟုတ်ပါဘူး - သူ့ ညာဘက်ဘေးမှာပါတဲ့ button လေးကနေ မိမိစိတ်ကြိုက် ပြောင်းပေးလို့လည်း ရပါတယ်။ Default အတိုင်းထားချင်မယ်ဆိုရင်တော့ ညာဘက် အစွန်ဆုံး button ကို ပြန်နှိပ် လိုက်ပါ။
အဲလို လိုက်ပြောင်းပြီး စမ်းကြည့်ရာကနေ ရလာမယ့် Result တွေကတော့ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ CCSM နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဒီလောက်နဲ့ အဆုံးသတ်ပြီး အကျယ်ထပ်လေ့လာချင်သူတွေ အတွက် နေရာကောင်းတွေ လမ်းညွှန်ပေးပါဦးမယ်။
COMPIZ SETTINGS MANAGER အသုံးပြုပုံအား အသေးစိတ် လေ့လာရန်
အားလုံးပဲ CCSM နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အဆင်ပြေပြေ အသုံးပြုနိုင်ကြပါစေ